Kalfadhigii 4aad ee xisbiga SPDU oo Muqdisho lagu soo gebagebeeyey iyo xildhibaano ka qeyb galay (DAAWO SAWIRO) | Somalisan.com Home
Kalfadhigii 4aad ee xisbiga SPDU oo Muqdisho lagu soo gebagebeeyey iyo xildhibaano ka qeyb galay (DAAWO SAWIRO) 1/2/2013 4:04:00 PM
gabagabadii aya awaxa agoobta shahaado sharaf lagu gudoonsiiyay tv-ga Somali channel iyo qaar kale oo kamid ah warabaahinta ka howl-gasha magaalada muqdisho iyadoona
Hotelka Jasiira ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa lagu soo gebagebeeyey maanta shirweynihii 4aad ee xisbiga Nabada iyo Dimoqraadiyada oo ka mid ah asxaabta siyaasadeed ee ka jirta Somalia.
Waxaa munaasabada gebagebada ka qeyb galay, xubnaha golayaasha iyo hogaanka xisbiga SPDU, xildhibaano ka tirsan Baarlamanka Somalia, madaxda axsaab kale iyo bahda saxaafada gudaha iyo dibeda.
Waxaa xafladaas hadalo furitaan ah ka jeediyey xoghayaha guud ee Xisbiga Nabada iyo Dimoqraadiyada C/salaan Maxamed Siyaad oo ka hadlay taariikhda iyo marxaladaha uu soo maray xisbiga, isagoo xusay in xisbiga Nabada iyo Dimoqraadiyada lagu aasaasay magaalada Bermingham ee dalka Ingiriisa sanadkii 2010-kii, wuxuuna tilmaamay in ka dib xisbiga loo soo raray Muqdisho sanadkii 2011-kii.
Waxaa sidoo kale ka mid ahaa xubnaha ka hadlay xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo ka mid ah Baarlamanka Somalia kaasoo sheegay inuu ku faraxsan yahay ka soo qeyb galka xafladan, wuxuuna xusay in xisbiga SPDU uu ka mid yahay xisbiyada ugu horeeyey ee dalka ka bilaabay dhaqdhaqaaq siyaasadeed iyo isbaheysiyo aan hubeysaneyn oo ujeedadiisu tahay in wax la toosiyo, talada dalkana laga wada tashado.
“Madaxweynaha hadda xilka haya waxaa uu ka soo jeeda Isbaheysiga uu ka tirsan yahay xisbiga SPDU, waxaana ka dalbaneynaa inuu ka soo baxo balanqaadkiisii ahaa inuu axsaabta siyaasadeed ee dalka siinayo muhiimad gaar ah, maadaama la soo wada halgamay, haddii laga waayo inuu qabto wixii uu shalay balanqaaday in la mucaarado oo la tusiyo qaladaadja ha ogolaado” ayuu intaa ku daray xildhibaan Prof. Dalxa.
Sidoo kale waxaa munaasabadaas ka hadlay xubno ah ka mid ahaayeen abwaan Cismaan C/llaahi Guure, xildhibaan Khaalid Cumar Cali, gudoomiyaha xisbiga Sahan Qaran, Axmed Dheere, Ex.xildhibaan Cali Seeko oo ka mid ahaa Baarlamankii hore gudoomiyaha golaha bulshada rayidka Soomaaliyed Muxyadiin Xasan Afrax Gudoomiyaha ururka haweenka Qaranka ubax tahliil iyo xubno kale, iyadoo xisbiga SPDU xafladaas ku gudoonsiiyey shahaadooyin qaar ka mid ah warbnaahinta Soomaalida.
“Waxaan ka digeynaa ciidamada aan ka tirsaneyn Booliska, nabad suigida iyo milateriga ee xukuumadu sheegtay in loo sameeynayo sugida amaanka Muqdisho, maxaa yeelay dastuurku ma qaray iney jiraan ciidmo kuwaas aan aheyn, waxaana qabnaa taas bedelkeed in ciidamada booliska iyo nabad sugida la tayeeyo” ayuu intaa ku daray C/llaahi Shiikh Xasan.
“Waxyaabaha dhaliisha ah ee weli miisaaniyada nooga muuqda waxaa ka mid ah sida loo yareeyey lacagaha loo qaoondeeyey adeegyada bulshada sida waxbaarshada, caafimaadka, biyaha iyo nadaafada, waxaana haboonaan laheyd in adeegyadaas dhaqaaler badan lagu bixiyo maadaama aad loogu baahan yahay” ayuu intaa ku daray C/llaahi Shiikh Xasan. gabagabadii aya awaxa agoobta shahaado sharaf lagu gudoonsiiyay tv-ga Somali channel iyo qaar kale oo kamid ah warabaahinta ka howl-gasha magaalada muqdisho iyadoona xubno ka socday xildhibaanada baarlamnka uruda bulshada rayidka iyo haweenka qaran uu shahaadii loogu tal galay Somali shannel uu ka gudoomiyahay agaasimaha Somali channel ee xarunta magaalada muqdisho maxamed siciid axmed sh aadan Warar kale oo xiiso leh halkaan ka aqriso. tweet FG: Shabakada Wararka ee Somalisan Mas'uul kama ahan Cidii ku xadgudubto Shaqsi Raalina kama noqonayso Somalisan.com. Fikirkaaga hoos kadhiibo: